Androidsis एक AB इन्टरनेट वेबसाइट हो। यस वेबसाइटमा हामी एन्ड्रोइड, सबै पूर्ण ट्यूटोरियलहरू र यस बजार क्षेत्रको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरूको विश्लेषणको बारेमा सबै समाचारहरू साझा गर्ने ख्याल राख्छौं। लेखकहरूको टोली एन्ड्रोइड संसारको बारेमा भावुक बनेको छ, यस क्षेत्रको सबै समाचार बताउने आरोपमा।
यो २०० 2008 मा शुरू भएको थियोदेखि, Androidsis एन्ड्रोइड स्मार्टफोन क्षेत्र मा एक संदर्भ वेबसाइट को एक भएको छ।
Androidsis सम्पादकीय टीम को एक समूह बाट बनेको छ एन्ड्रोइड टेक्नोलोजी विज्ञहरू। यदि तपाईं पनि टीमको भाग हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ सम्पादक बन्न हामीलाई यो फारम पठाउनुहोस्.
बार्सिलोना, स्पेनमा जन्मिएको, मेरो जन्म १ 1971 .१ मा भएको थियो र म सामान्यतया कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूको बारेमा भावुक छु। मेरो मनपर्ने अपरेटिंग सिस्टमहरू मोबाइल उपकरणहरूको लागि एन्ड्रोइड र ल्यापटप र डेस्कटपहरूको लागि लिनक्स हो, यद्यपि म्याक, विन्डोज र आईओएसमा म राम्रो तरिकाले गर्छु। यी अपरेटि systems प्रणालीहरूको बारेमा मैले जानेका सबै कुरा मैले एक स्वयं-सिकाइएको तरीकामा सिकेका छन्, एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणहरूको विश्वमा १० बर्ष भन्दा बढीको अनुभव स !्कलन!
लेखक र सम्पादक एन्ड्रोइड र यसका ग्याजेटहरू, स्मार्टफोनहरू, स्मार्टवाचहरू, पहिरन योग्य, र सबै चीज गीक-सम्बन्धितमा विशेषज्ञता प्राप्त। म टेक्नोलोजीको संसारमा प्रवेश गर्दै थिएँ जबदेखि म एउटा बच्चा थिएँ र त्यसदेखि नै, हरेक दिन एन्ड्रोइडको बारेमा अधिक जान्नु मेरो सबैभन्दा खुशीको काम हो।
स्मार्टफोन बजारमा प्रवेश गर्नु अघि, मैले विन्डोज मोबाइलद्वारा प्रबन्धित पीडीएको शानदार संसारमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएँ, तर रमाइलो गर्नुभन्दा पहिले, मेरो पहिलो मोबाइल फोन, एउटा अल्काटेल वन टच इजी, मोबाइल जसले ब्याट्री बदल्न अनुमति दियो। क्षारीय ब्याट्री २०० In मा मैले मेरो पहिलो एन्ड्रोइड ब्यवस्थित स्मार्टफोन रिलिज गरें, विशेष गरी एचटीसी हीरो, एक उपकरण जुन मसँग अझै धेरै स्नेहको साथ छ। अब देखि धेरै स्मार्टफोनहरू मेरो हातमा पार गरिसकेका छन्, यद्यपि, यदि म आज एक निर्मातासँग बस्छु भने, म Google पिक्सेल छान्छु।
मैले २०० Android मा एचटीसी ड्रीमको साथ एन्ड्रोइडको साथ शुरू गरें। मेरो उत्कटता त्यस वर्षदेखि पैदा भएको थियो, यस अपरेटिंग प्रणालीसँग २ 2008 भन्दा बढी फोनहरू छन्। आज म एन्ड्रोइड सहित बिभिन्न प्रणालीहरु को लागी अनुप्रयोगको विकासको अध्ययन गर्दछु।
मेरो पहिलो फोन एक एचटीसी डायमंड थियो जसमा मैले एन्ड्रोइड स्थापना गरें। त्यो क्षणदेखि नै मैले गुगल अपरेटिंग सिस्टमको साथ प्रेम गर्न थालें। र, जब म मेरो अध्ययनहरू संयोजन गर्दछु, म मेरो ठूलो जोशको आनन्द लिन्छु: मोबाइल टेलिफोनी।
Hooked र पछि बन्डल ... सधैं! एन्ड्रोइड संसार र यसका वरिपरिको सबै अविश्वसनीय इकोसिस्टमसँग। म स्मार्टफोनहरू र सबै प्रकारका एन्ड्रोइड मिल्दो ग्याजेटहरू, सामानहरू र उपकरणहरूको बारेमा परीक्षण, विश्लेषण र लेख्छु। "अन" हुन प्रयास गर्दै, सिक्नुहोस् र सबै समाचारको टाढा राख्नुहोस्।
२०१० देखि सबै प्रकारका एन्ड्रोइड उपकरणहरूको विश्लेषण। यो पाठ्यहरूलाई प्रसारण गर्न सक्षम हुन टेक्नोलोजिकल प्रगतिहरूको गहिराईमा जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। "सबै कुरा निर्दिष्टिकरणहरू हुँदैन, मोबाइलहरूमा त्यहाँ अनुभव हुनुपर्दछ" - कार्ल पेई।
प्राचीन कालदेखि नै एन्ड्रोइडको परीक्षण गर्दै, Google को अपरेटिंग प्रणालीमा मेरो रुचिले मलाई मद्दत गर्न सक्ने सबै उपकरणहरू प्रयास गर्न खोज्दछ। म उनीहरूसँग तुलना गर्न चाहन्छु, उनीहरूको विशेषताहरू विस्तृत रूपमा जान्नुहोस्, र उनीहरूले प्रस्ताव गरेको सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
एन्ड्रोइडको साथ प्रेममा कि बर्षदेखि नै बिभिन्न प्रणाली र स्मार्टफोन प्रयोग गरीरहेको छ। यो आइसक्रिम वा सुक्खा फलको नाम भएको हुनाले, मैले आफैलाई एन्ड्रोइड नत्याग्ने वचन दिएँ। म टेक्नोलोजी मन पराउँछु र सबै समाचारको साथ अप टु डेट रहन्छु।
एक एम्स्ट्राडले मेरो लागि टेक्नोलोजीका ढोकाहरू खोल्यो र त्यसैले म Android बर्ष भन्दा बढिमा एन्ड्रोइडको बारेमा लेख्दै छु। म आफैंलाई एन्ड्रोइड विज्ञ मान्दछु र मलाई यो अपरेटिंग प्रणाली समावेश गर्ने विभिन्न उपकरणहरूको परीक्षण गर्न मनपर्छ।
यात्रा, लेखन, पढन र सिनेमा मेरो महान जोश हो, तर तिनीहरू मध्ये कुनै पनि यदि यो एन्ड्रोइड उपकरणमा छैन भने। गुगलको अपरेटिंग प्रणालीमा यसको शुरूदेखि नै रूचि छ, मलाई दिनदिनै यसको बारेमा सिक्ने र आविष्कार गर्न मनपर्छ।
अल्फोन्सो डे फ्रुटोस
नयाँ टेक्नोलोजीहरू र एन्ड्रोइडको लागि मेरो उत्कटता संयोजन, मेरो ज्ञान र यस ओएसको बारेमा अनुभव साझेदारी गर्दा यसको अधिक र अधिक सुविधाहरू पत्ता लगाउँदै, यो ममा अनुभव छ।
मलाई सामान्यमा नयाँ टेक्नोलोजीमा र विशेष गरी एन्ड्रोइडमा अप टु डेट हुन मन पर्छ। म विशेष गरी शिक्षा क्षेत्र र शिक्षासँगको यसको सम्बन्धबाट मोहित भएको छु, त्यसैले म अनुप्रयोगहरू र गुगल अपरेटि system प्रणालीको नयाँ कार्यक्षमताहरू पत्ता लगाउन आनन्द लिन्छु जुन यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ।
म एन्ड्रोइड को लागी भावुक छु। मलाई लाग्छ कि सबै राम्रा सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसैले म मेरो अपरेटिंग प्रणालीको बारेमा जान्न र सिक्नको लागि मेरो समयको एक राम्रो हिस्सा खर्च गर्दछु। यसैले म आशा गर्छु कि तपाइँ तपाइँलाई एन्ड्रोइड टेक्नोलोजीको साथ तपाइँको अनुभवलाई उत्तम बनाउन मद्दत गर्दछ।
टेक्नोलोजीले जहिले पनि मलाई आकर्षित गर्यो, तर एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको आगमनले विश्वमा भइरहेको सबै कुरामा मेरो रुचि केवल गुणा गरेको छ। एन्ड्रोइडको बारेमा सबै नयाँ खोजी, जान्नु र पत्ता लगाउनु मेरो जुनसुकै कारण हो।